Fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC, voafonja nikomy sy notifirina tany Farafangana, fisantarana fampindramam-bola, fanakatonana ny orinasa AAA... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC, voafonja nikomy sy notifirina tany Farafangana, fisantarana fampindramam-bola, fanakatonana ny orinasa AAA...
Fanamafisana ny nambaran’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, tamin’ny alin’ny alahady 23 aogositra no nataon’ny tompon’andraikitra isan-tokony taorian’izany tamin’ny TVM sy RNM ary haino aman-jery tsy miankina. Anisan’izany, ny alatsinainy 24 aogositra, ny amin’ny fepetran’ny fisokafan’ny fitaterana amin’ny ampahany nentin’ny minisitry ny Fitaterana sy ny Fizahan-tany, Joël Randriamandranto, sy ny momba ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC nentin’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Sahondrarimalala Marie Michèle. Nilaza ny minisitra fa ho tanterahina ireo fanadinana ireo amin’ny daty nambaran’ny filoham-pirenena ary hisy ny fanontan’ny CNAPMAD ny laza adina. Nisy fitokonan’ny mpiasa moa tao amin’ity foibe misahana ny famokarana fitaovana enti-mampianatra ity, noho ny karama tsy voaloa, saingy efa voalamina raha ny nambaran’ny minisitra. Ity minisitry ny Fanabeazam-pirenena ity dia voatendry tamin’ny 20 aogositra 2020 niaraka tamin’ireo telo hafa : minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis, misolo an’ilay nesorinan ny Profesora Ahmad Ahmad ; minisitry ny Fampianarana Teknika sy Fanofanana arak’asa, nosarahina tamin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Tsikel’iankina Ernest, ary Michelle Bavy Angelica, minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ny ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny vehivavy, noho ny safidin’ny nosoloiny, Naharimamy Irmah.
Vaovao niely tamin’ny fampitam-baovao samihafa koa ny fahavakisan’ny fonjan’i Farafangana tamin’ny alahady 23 aogositra ka nahafaty voafonja 20 noho ny tifitra nahazo azy ireo. Mila fanadihadiana ny raharaha raha ny nambaran’ny depiote Brunelle Razafitsiandraofa, notaterin’ny gazety mpivoaka isan’andro.
Anisan’ny raharaha niteraka resaka tamina tambajotra sosialy sy gazety eto an-toerana sy any ivelany tamin’iny herinandro iny koa ny fividianana fitaovana informatika nisian’ny kiantranoantrano nataon’ny minisitry ny Atitany Razafimahefa Tianarivelo, izay sady mpitantana ny CCO, foibe fanomezam-baovaon’ny Covid-19 ka nitakian’ny fiarahamonim-pirenena ny mangarahara momba ny fampiasana ny vola amin’ny Covid-19.
Nanamarika iny herinandro iny koa ny vaovao momba ny fanakatonana ny orinasa AAA an’ny filoha telo aloha, Ravalomanana Marc, etsy amin’ny Magro Behoririka, tamin’ny alarobia 19 aogositra 2020, noho ny resaka tsy fandoavan-ketra, avy amin’ny foibem-pitondrana momba ny hetra.
Nosantarin’ny filoham-pirenena tamin’ny 25 aogositra ny fitrosana vola amin’ny CNaPS ataon’ny mpiasa amin’ny orinasa tsy miankina, antsoina hoe ‘tsinjo fameno’. Notaterina tamin’ny haino aman-jerim-panjakana ny fizotran’izany.
Mitohy hatrany ny fanomezana ny antontanisa ofisialy momba ny fivoaran’ny ‘covid-19’ ataon’ny mpitondra teny ofisialy, ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle. Marihana fa nisy fahatapahan-jiro tamin’ny faritra maro tao Antananarivo tamin’ny fotoana nandehanan’ny fandaharana manokana momba ny fivoaran’ny ‘covid-19’, ny alarobia 26 aogositra manodidina ny tamin’ny 2 ora tolakandro, tamin’ny fotoanan’ny doka momba ny CVO. Manodidina ny 70 eo ny tranga vaovao tato ho ato, ary mihena ny am-pitsaboana. Mihena manodidina ny 500 isan’andro ny fitiliana atao. Eo amin’ny maty, raha 173 no fitambarany tamin’ny 19 aogositra, dia 181 izany tamin’ny 26 aogositra, izany hoe nisy maty 8 tanatin’ny herinandro. Miisa 56 065 ny fitiliana PCR natao hatramin’ny 26 aogositra ary 5400 ny avy amin’ny teknika Genexpert. Maneran-tany tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity, dia maherin’ny 23 tapitrisa ireo tratran’ny ‘covid-19’ ka ny 12 tapitrisa mahery no sitrana, ary maherin’ny 800 000 no namoy aina.
Finoana sy tantara : Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa - il y a 11 heures